Manahirana ny tena fampiharana didy aman-dalàna… | NewsMada
Manahirana ny tena fampiharana didy aman-dalàna…
Par Taratra sur 02/06/2018
Amin’izao toe-draharaham-pirenena sarotra sy manahirana izao, ny didy fanapahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) indray no mampifanditra, mampifanenjana, mampifandroritra… Inona ny marina?
Valalanina sy fanina ny vahoaka. Ny mpahay lalàna aza, tsy mitovy hevitra sy fijery be ihany: samy manana ny filazany sy izay andraisany azy. Vao mainka ny mpanao politika, miteny sy mihetsika araka ny tombontsoany avy.
Iza no hoe maro anisa manolotra Praiminisitra, ohatra? Mila na tsy maintsy atao ve ny hoe fifanarahana politika, ary iza avy no hanao azy? Inona ity hoe governemanta iraisana na iza avy no ho mpikambana amin’izany?
Ao àry ny mangata-panazavana: manao izay hampitarazoka ny raharaha? Eo ny fe-potoana tsy maintsy hajaina. Misy ny manao amboletra fotsiny izao amin’izay saim-pantany hoe andraikiny, ka manao fampihaonana, ohatra.
Miharihary izao fa tsy mandamin-javatra araka izay nandrasana sy nanampoizana azy aloha ny fanapahan’ny HCC. Tsy fanapahana araka ny lalàmpanorenana tsinona, fa fanelanelanana sy fandaminana politika ihany.
Ho tonga hatraiza? Izay heverina ho vahaolana no lasa olana ho azy. Tsy mazava? Eo hatrany ny fitadiavana sy fiadiana tombontsoa manokana; na izay atao, hanosehana ny hafa amin’izay mahametimety ny tena hatrany.
Inona àry ny vahaolana? Mila fanazavana amin’ny HCC, ohatra, ny fanapahana navoakany. Farafaharatsiny, mba iombonana ahay ny dikany. Tena maharesy lahatra ny fankatoavana sy fanatanterahana izany, fa tsy hoe tsy fidiny.
Mila sorohina dieny mialoha ny fiandrasana kendry tohina, na valifaty, na faminganana… Azo inoana sy ho tanteraka ve izany amin’izao fifanenjanana sy fifanenjehana izao? Na amin’ny fampiharan-dalàna sy didy hoe vahaolana aza…
Manahirana ny tena fampiharana didy aman-dalàna? Na loza fa mampifandroritra, mampifanditra… Mitaky fitiavan-tanindrazana marina, fitsinjovana vahoaka… Aiza ho aiza? Izay no tena olana amin’izao.